Nezvedu - Wuxi Co-Ona kurongedza Co, Ltd.
1.Supplier yeBrands Maui Jim, Costa, Spy, Komono, BCBG, Fielmann nezvimwe.
2.Contain akasiyana magirazi ezuva, magirazi mafuremu, tarisiro makesi, maziso ekuchengetedza zvigadzirwa.
3.OEM. Gamuchira yakaderera huwandu hwekuyedza odha.
4.10 + ruzivo, CO-Ona inopa yakasarudzika sevhisi.
5.Professional vatengesi, vape 24-awa vatengi vatengi online
Tine vatengi mune dzinopfuura nyika makumi matatu uye mukurumbira wedu wakanaka uripo pakati pevatsva nevakuru vatengi.
Isu takazvipira pachedu kupa mhando dzese dzemhando yepamusoro magirazi kesi uye zvishongedzo dhizaini uye mabasa ekugadzira evatengi vepasirese.
Zvikwata zvedu zvekutengesa zvine hunyanzvi hwepamusoro uye hunyanzvi. Isu tinopa 24-awa online sevhisi kune vatengi vedu kubva pasirese pasirese, vachipindura mibvunzo nezve zvinhu, saizi, logo uye mamwe mapakeji maitiro.
Sezvo isu tiri vagadziri, isu tinopa yakadhura-mutengo kutenga, imwe-yekumira kutenga uye mhando yekutarisa.
Isu tinopa inokurumidza chigadzirwa package uye inotumirwa nguva. Kupakata kwedu kuchaderedza kukanganisa kwezvigadzirwa mukufamba uye kutenderera sezvazvinogona, kuve nechokwadi chekuchengetedza zvigadzirwa, kuita nyore kuchengetedza, kutakura, kurodha uye kuburitsa, uye nekumhanyisa iyo yekupa poindi yekutarisa.
Tichiomerera mukuzvipira kwedu kugutsa vatengi 'kurongedza zvinodiwa, isu tinotsvaga marudzi ese eminda kuti tibatanidze edu emaketani emaketani uye zviwanikwa, kuti tipe vatengi vedu imwechete-mira yekutenga sevhisi, yakanakisa uye inokurudzira vatengi ruzivo.